▷ Jiilkee Z iyo Kun-kunaadyadu ka rabaan Loo-shaqeeyayaasha - 【 TechRadar 】 2022
Iyadoo shaqo la'aanta ka jirta warshadaha tignoolajiyada ay kor u dhaafeyso 2%, shirkaduhu waxay ku qasbanaan doonaan inay wax ka qabtaan walaacyada shaqaaleysiinta cusub haddii ay rabaan inay ku guuleystaan ​​soo jiidashada iyo sii wadista tayada sare. Laba sahan oo cusub ayaa muujinaya waxa shaqaalaha da'da yar ay rabaan iyo waxa ay shirkaduhu u baahan yihiin inay sameeyaan si ay ula tacaalaan is-casilaadda baahsan iyo isbeddellada goobta shaqada ee uu keenay masiibada COVID-19.
Sida laga soo xigtay sahannada, mid ay samaysay la-talin ganacsi Deloitte LLP iyo kan kale oo ay samaysay software-sameeyaha maaraynta goobta shaqada Robin Powered, shaqaalaha da'da yar ee da'da yar ayaa dareemaya gubasho, waxay la kulmaan walaac dhaqaale, qabtaan shaqooyin labaad waxayna rabaan shaqo diiradda saaraya iyo dabacsanaan.
Oh, oo waxay rabaan in xirfadahooda ay la socdaan arrimaha shakhsi ahaaneed iyo kuwa caalamiga ahba.
Hal qayb oo ka mid ah Robin Powered, Inc.
"Way gubteen: 58% Gen Z waxay hadda la il daran yihiin gubasho," ayuu yiri Robin CEO Micah Remley. "Iyo in kasta oo magdhowgu uu yahay lama huraan, kama caawin doono walaaca. Kooxdani waxay soo warisay in wakhtiga dheeraadka ah ee fasaxa iyo ilaha caafimaadka dhimirka ay ka caawin doonaan inay si fiican u maareeyaan.
Gen Z moniker waxaa badanaa lagu dabaqaa dadka dhashay intii u dhaxaysay 1997 iyo 2012, taasoo la macno ah xubnaha ugu da'da weyn kooxdan hadda waa ku dhawaad ​​25 sano jir. Marka la gaaro 2025, Generation Z wuxuu ka dhigi doonaa ku dhawaad ​​27% shaqaalaha adduunka, sida laga soo xigtay Madasha Dhaqaalaha Adduunka (WEF), inkastoo xogta kale ay riixeyso tiradaas xitaa sare. (Millennialsku waxay ka kooban yihiin 37% xoogga shaqada maanta, marka loo eego WEF.)
Labada sahan, Deloitte ayaa si gaar ah diiradda u saaray shaqaalaha Gen Z iyo Gen Y. Waxay heshay:
46% ee Gen Z iyo 45% ee Gen Y waxay dareemeen gubasho ay ugu wacan tahay xoojinta/dalabka deegaankooda shaqada.
44% Gen Z iyo 43% Gen Y ayaa sheegaya in dad badan ay dhawaan ka tageen ururkooda cadaadis shaqo oo culus awgeed.
Ku dhawaad ​​kala badh Gen Z (46%) iyo Millennials (47%) ayaa ku nool jeegaga mushaharka waxayna ka cabsi qabaan inay dabooli waayaan kharashaadkooda.
In ka badan rubuc ka mid ah Gen Z (26%) iyo Millennials (31%) waxay ka baqayaan inaysan si raaxo leh uga fariisan doonin.
Qiyaastii saddex-meelood meel Gen Z (72%) iyo Millennials (77%) ayaa isku raacay in farqiga u dhexeeya dadka ugu taajirsan iyo dadka ugu saboolsan dalkooda uu sii ballaaranayo.
Guud ahaan qiimaha nolosha) waxa kale oo uu sheegay Gen Z (29%) iyo kun-sannadii (36%) walaacooda ugu sarreeya.
"Qiimaha walaaca ee nolosha ayaa laga yaabaa inay calaamad u tahay waqtiyada, marka la eego heerarka sare ee sicir bararka, laakiin sidoo kale waxay ka hadlaan arrimaha jiilashani ay muujinayaan sanado: ma dareemaan ammaan dhaqaale shakhsi ahaan iyo dareen bulsho oo ballaadhan. . heerka, waxay aad uga walaacsan yihiin sinnaan la'aanta hantida, "Deloitte ayaa ku tiri warbixinteeda.
"Haddii aan kala hadalno kuwa kor u qaada ama Gen Xers wax ku saabsan faa'iidooyinka caafimaadka dhimirka, waxay dhihi lahaayeen waa ganacsigeyga ee ma ahan shaqa-bixiyahayga. Halka Gen Z uu ka doonayo caawinta caafimaadka dhimirka ee loo shaqeeyaha. - Micah Remley, maamulaha guud ee Robin
Iyada oo ay ku dhex jirto jahawareerkan dhaqaale, qaar badan oo Gen Z iyo Millennials ayaa dib u qeexaya caadooyinkooda shaqo. In ka yar 43% ee Gen Z iyo 33% ee Gen Y waxay haystaan ​​shaqo labaad oo waqti-buuxa ama qayb-dhiman ah oo ay u dheer tahay shaqadooda ugu weyn.
Deloitte waxa kale oo ay ogaatay in tiro yar laakiin sii kordhaysa ee shaqaaluhu ay u guurayaan magaalooyin ka jaban oo leh shaqooyin fogfog, taas oo hoosta ka xariiqday muhiimada ay siinayaan qabanqaabada shaqada ee dabacsan.
"Tani waxay u muuqataa in ay kor u kacday: Qiyaastii 15% ee Gen Z iyo millennials ayaa sheegaya inay sidaas sameeyeen sanadkan, marka la barbardhigo 9% jawaab bixiyaasha sahankii sannadkii hore oo sheegay inay ka tageen. qaab ku meel gaar ah ama joogto ah oo ah magaalo ganacsi oo weyn. '. Deloitte ayaa wariyay.
Markay timaaddo marka ay jeclaan lahaayeen inay shaqeeyaan, 36% waxay yiraahdeen qaabka 9-5 ee caadiga ah, Isniinta-Jimcaha ayaa u shaqeeyay iyaga. Tiro la mid ah oo jawaab bixiyaasha ah (28%) waxay door bidaan afar maalmood oo usbuuc shaqo ah, halka 28% ay door bidaan saacadaha shaqada ee dabacsan in ka badan 9-5 saacadood ee caadiga ah gudaha shanta maalmood ee usbuuca shaqada.
"Sida Generation Z uu sii wado inuu galo xoogga shaqada, dabacsanaantu waxay sii ahaan doontaa magaca ciyaarta," ayuu yiri Deloitte.
Waxaa jira baahi cad oo loogu talagalay shaqo dabacsanaan badan: hadda, 49% xubnaha jiilka Z iyo 45% kun sano ayaa ka shaqeynaya meel fog iyo inta badan, illaa saddex meelood saddex meelood ayaa caddeeyey in teletravail uu noqon doono habka. shaqada door bidayso.
Xogta Robin ayaa ku celcelinaysa rabitaanka goob shaqo oo isku-dhafan ama dabacsan. Waxay ogaatay in 66% Gen Zers oo ka shaqeeya xafiiska si buuxda ay rabeen inay noqdaan isku-dhafan (46%) ama si buuxda u fogaan (20%), halka in ka badan 73% kuwa meelaha fog ka shaqaynayay ay sheegeen inay taas jecel yihiin. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale muujisay in haddii ay naqshadayn karaan booska xafiiska "ku habboon", inta badan shaqaalaha Gen Z waxay jeclaan lahaayeen in ay helaan meelo xafiisyo oo lagu qeexay derbiyo, ma aha qolooyin.
Shirkaduhu waxay hore u haysteen ama isku diyaarinayaan inay balaadhiyaan booska wada shaqaynta ee dhismayaashooda xafiiskooda si ay u dajiyaan xoog shaqaale isku-dhafan oo aad u badan.
Sahannada Deloitte iyo Robin waxay muujinayaan in Gen Z iyo Millennials ay rabaan isku dheelitirnaan nololeed shaqo iyo shaqo, fursado wanaagsan oo waxbarasho iyo horumarin, taageero wanaagsan oo caafimaadka maskaxda iyo fayoobida, iyo ballanqaad weyn oo shirkadeed si ay u yeeshaan saameyn bulsho oo togan.
"Mawduuca soo noqnoqda ee General Z, oo ay weheliso mushaharka, ayaa diiradda saaraya dabacsanaanta goobta shaqada iyo caafimaadka dhimirka. Kuwani waa laba meelood oo aan ku aragno farqi weyn oo ka imanaya jiilalka kale,” Remley ayaa yidhi. "Haddii aan kala hadalno kuwa kor u qaada ama Gen Xers wax ku saabsan faa'iidooyinka caafimaadka dhimirka, waxay dhihi lahaayeen waa ganacsigeyga ee ma ahan shaqa-bixiyahayga. Halka Gen Z uu ka doonayo caawinta caafimaadka dhimirka ee loo shaqeeyaha. »
Faa'iidooyinka ayaa ku jira darajo sare labada sahanba sababta oo ah shaqaalaha loo soo jiito oo ay rabaan inay la joogaan urur. Liiska ugu sarreeya: daryeelka caafimaadka dhimirka ee wanaagsan iyo bixinta daryeelka caafimaadka guud.
Iyo, loo-shaqeeyayaashu waxay u muuqdaan inay horumar samaynayaan markay timaaddo mudnaanta la siinayo caafimaadka maskaxda iyo fayoobida goobta shaqada, Deloitte ayaa sheegay.
"In ka badan kala badh ayaa isku raacay in fayoobaanta iyo caafimaadka dhimirka ee goobta shaqada ay noqdeen mudnaanta loo-shaqeeyayaasha tan iyo bilowgii masiibada. Si kastaba ha ahaatee, ra'yiga ayaa lagu kala qaybsan yahay in dareenka kordhay uu dhab ahaantii saameyn wanaagsan yeelanayo," ayuu yiri Deloitte. . lagu dhawaaqay.
Sahan saddexaad oo Arbacadii uu sii daayay shaybaadhka Quest Diagnostics ayaa lagu ogaaday in ururradu ay si adag uga shaqaynayaan sidii ay u soo jiidan lahaayeen oo ay u haysan lahaayeen kartida, laakiin badi shaqaalaha ayaa weli ka fikiraya inay beddelaan shaqooyinka.
Quest waxa uu sahamiyay 423 maareeyayaasha ilaha shaqaalaha iyo go'aamo fulineed (HRDs) iyo 846 shaqaale cadaan ah oo ka shaqeeya shirkado leh ugu yaraan 100 shaqaale ah. Waxa ay ogaatay in ku dhawaad ​​saddex-meelood laba (66%) shaqaalaha la sahamiyay ay qorshaynayaan in ay beddelaan shaqooyinka sanadka soo socda, ay qaadeen tillaabooyin ay ku samaynayaan, ama ay dhawaan bilaabeen shaqo cusub. In ka badan 22% ayaa si firfircoon u raadinaya shaqo cusub.
Sida laga soo xigtay Quest, rajada laga qabo samaynta lacag badan ayaa ah dhiirigelinta ugu sareysa ee 55% shaqaalaha la sahamiyay iyagoo tixgelinaya isbeddel shaqo, oo ay ku xigto faa'iidooyin wanaagsan guud ahaan, oo ay ku jiraan faa'iidooyinka daryeelka caafimaadka iyo dheelitirka nolosha shaqada.
La yaab ma leh, muhiimada magdhowgu waxay ka muuqatay sahannada kale. Robin, tusaale ahaan, wuxuu ogaaday in 44% shaqaalaha Gen Z ay sii joogi doonaan shaqo aysan ku qanacsanayn, ilaa iyo inta mushaharku fiican yahay. Taas bedelkeeda, 47% waxay sheegeen inay farxad ka door bidaan lacag.
Dhab ahaantii, Deloitte waxay ogaatay in mushaharku uu ahaa sababta ugu sarreysa ee Gen Z iyo Millennials ay uga tageen shaqadooda labadii sano ee la soo dhaafay, isbeddel aan ka baxsaneynin shirkadaha teknoolajiyada oo kor u qaadaya mushaharka si ay u sii haystaan ​​kartida. Si kastaba ha ahaatee, marka aad dooranayso shaqo-bixiye cusub, dheelitirnaanta nolosha shaqada iyo fursadaha waxbarashada iyo horumarinta ayaa ahaa mudnaanta koowaad.
Robin waxa uu ogaaday in 39% shaqaalaha Gen Z ay rabaan in ay dhistaan ​​qoys halka 49% ay rabaan in ay guri iibsadaan shanta sano ee soo socota, "sidaa daraadeed la yaab ma leh in ay ku dhiiradaan magdhow," ayuu yiri Remley oo ka tirsan Robin.
Shirkadaha isku dayaya inay ogaadaan sidii ay shaqaalahooda ugu farxi lahaayeen, mushahar kordhin - gaar ahaan, in ka badan 10% - waxay ka caawisay inay sii haystaan ​​shaqaalaha ka fikiraya inay joojiyaan shaqadooda. "Marka la eego in inta badan kuwa la wareystay ay helaan wax ka yar € 40,000, loo-shaqeeyayaashu waa inay tixgeliyaan kordhinta mushaharka laga bilaabo € 4,000 ilaa € 8,000 si loo sii haysto kartida Gen Z," Remley ayaa yidhi.
Jiilka Z iyo kun-sano-yadu sidoo kale waxay ku riixayaan loo-shaqeeyayaasha inay la dagaallamaan isbeddelka cimilada, gaar ahaan marka ay timaado dadaallada ay si toos ah uga qayb qaadan karaan. Laakiin waxaa laga yaabaa in shirkaduhu ay wali waayaan fursadaha ay ku qaadaan tallaabo cimilo oo ballaadhan, sahanno ayaa muujinaya.
La jaanqaadida qiyamka shaqaaluhu waxay lama huraan u tahay loo-shaqeeyayaasha doonaya inay soo jiitaan oo sii haystaan ​​kartida dhalinyarada. Ku dhawaad ​​laba ka mid ah shantii qof ee uu waraystay Deloitte ayaa sheegay in ay diideen shaqo ama meelayn sababtoo ah ma waafaqsanayn qiyamkooda. Dhanka kale, kuwa ku qanacsan saameynta bulshada iyo deegaanka ee loo-shaqeeyaha iyo dadaalka shirkadu si ay u abuurto dhaqan kala duwan oo loo dhan yahay waxay u badan tahay inay rabaan inay la joogaan loo shaqeeyahooda in ka badan shan sano.
"Haddii aad eegto jiilalka hore, ma aysan lahayn awood ay ku weydiistaan ​​waxyaalahan," Remley ayaa ka yiri Robin. "Gen Zers hadda waa da 'weyn, iyadoo lagu jiro waqti dhaqaale aad u xooggan, halkaas oo awooddu ay u wareegtay shaqaalaha. Waxay rabaan aasaaska, iyo wax badan oo ka mid ah, laakiin intaa ka sii badan, waxaad arkaysaa in aysan ka cabsaneynin inay dalbadaan faa'iidooyin kale sida toddobaad shaqo oo afar maalmood ah, waxay gelayaan xoogga shaqada waqti, waqti, xaddidaadda kartida suuqa shaqada, waxay codsan karaan wax badan oo ay heli karaan.
Deloitte waxay jawaabaha ka soo ururisay 14 Gen Z shaqaale ah iyo 808 kun sano oo ka kala yimid 8412 wadan oo ku yaal Waqooyiga Ameerika, Latin America, Galbeedka Yurub, Bariga Yurub, Bariga Dhexe, Afrika, iyo Aasiya-Baasifigga. Jawaab bixiyaasha Gen Z waxay da'doodu u dhaxaysay 46 iyo 19; Jawaab bixiyaasha kunka sano (sidoo kale loo yaqaan kun-sano) waxay da'doodu u dhaxaysay 27 iyo 28. (Robin waxa uu sahamiyay 39 oo shaqaale ah oo da'doodu u dhaxayso 600 ilaa 18 jir gudaha Maraykanka.)
Sahanka Deloitte waxa la sameeyay intii u dhaxaysay Noofambar 2021 iyo Jannaayo 2022, waraysiyo xigayna waxa la sameeyay Abriil 2022.